Umhla My Pet » Top Five Tips Online Safety Dating
ukubuyekezwa: Apr. 09 2020 | 3 min ukufunda
Kanye njengokuba ulazi zemveli, ukuthandana online ntoni kuthabatha kuyo imingcipheko ezimbalwa. Kukho kusoloko abantu apho oneenjongo ezimbi okanye eziyingozi. Nangona iinkonzo ezininzi ukuthandana intanethi Siphumeze amanyathelo zokuhlola nokhuseleko ukususa ezinye izaphuli okanye abantu abatshatileyo, oku soze luchane, kwaye kuxhomekeke ukuya umntu ukuba athathe amanyathelo okhuseleko ezandleni zabo.
Nanga amacebiso ezintlanu ukhuseleko ukuthandana online ukuba kubalulekile ekukhuseleni wena xa uthandana online:
1. Yenza akhawunti yakho email abangaziwayo. Sebenzisa ngenkonzo akhawunti email okhululekileyo njengathi Hotmail okanye Yahoo! ukuba imlungisele akhawunti email ungabunikeliyo nayiphi na inkcazelo yobuqu. Musa ukusebenzisa idilesi yemeyile umsebenzi wakho okanye idilesi esibonisa igama lakho elipheleleyo xa unxibelelana neentelekiso ukuthandana online. ngokunjalo, musani ukuba idilesi ye email yakho ngokukhawuleza kakhulu. Kukho abanye abantu ukuba basebenzise iinkonzo ukuthandana intanethi ukuqokelela ekunqandeiidilesi zzemeyile uphuhlisa elimsulwa ukuze ukuthumela imiyalezo ekumsonto ngaphandle.
2. Nika inani lenu cell phone kunokuba inombolo yakho ekhaya xa ifowuni call isigaba ukuthandana online. Ukuba zidweliswe encwadini yefowuni, angatyhafi inombolo yakho yefowuni yasekhaya ifana nangokunika ndizele igama kunye nekhaya idilesi yakho. Neteknoloji online, kulula ukuchwetheza inombolo yefowuni ikhaya waya Google, kwaye, ukuba inani ikuluhlu, igama lakho nedilesi liyakuyibonisa kunye nenombolo yefowuni. Uya kunika ulwazi ngaphezu ucinga wena.
3. Meet kwindawo kawonke ngemihla zakho zokuqala ezimbalwa. Indawo kawonke kuqinisekisa kwinqanaba eliphezulu ukhuseleko nokhuseleko njengoko kuya kuba ngamangqina aliqela nomhla lakho akuyi kwazi ukuba idilesi yakho yasekhaya. Yinto Kukwalicebo ukuba uxelele umhlobo apho uya kuba xa uya kuba kukubuya, mhlawu ngephutha.
4. Soloko Ungakruquki umntu ecela imali. Ukuba umntu uthetha ngokusebenzisa inkonzo ukuthandana intanethi liqalisa ucela imali phambi udibana, uyakwazi phantse iqinisekise ukuba amagcisa Koluny. Kukho arhente Brideî ìRussian phandle uzama scam amadoda nofika yimali ngokuthi abafazi (ngamanye amaxesha abafazi musa nokuba ngokwenene) ukucela imali amadoda ngomoya ukuya kubabona, kuphela shwaka emva kokufumana imali. Akukho sizathu ukuba ukuthandana online makungaquki unika imali abanye umntu. Ukuba ufuna ukutyelela Iveta in Slovenia, ukuze kuphume ukuba ambone, musa ukumnika imali yakhe.
5. Uthembe emathunjini yakho. Ukuba nyusa lisiba ukuxelela ukuba umfana okanye intombazana ukuba uthetha inyaniso kuni, na oneenjongo ezimbi, okanye uzakuphela kukhathaza, phulaphuliyo loo ithuku. Ukuba uphawula naziphi hoyi, ezifana ngokucinezela inkcazelo yobuqu ngokukhawuleza kakhulu, unyanzelisa ukuba nithatha endlwini yakho komhla wokuqala, okanye utyekelo isimnini nangaphambi udibana, ucinge kabini ngokuchazela abanye inombolo yefowuni yakho, idilesi yemeyile, okanye ingakumbi idilesi yasekhaya. Kwakhona bagcine iliso phandle umntu esele yendela. Ukuba asifuni ukuba kubiza, ayiyi kunika iinkcukacha indlela yabo, uze uzame ukuba yonke into emfihlekweni, kungenzeka ukuba usebenza umntu otshatileyo.
Khumbula ukuba nangona ezinye iindawo ukuthandana choisir mvelapho, kufuneka uhlale nizilinde. Abantu lityibilike iintanda itshekhi kwisiqalo ukuze musa ukuvumela iitsheki yolwaphulo nokutshata ndikunike ngokuzicingela kukhuseleko. ukuthandana Intanethi kunokuba yindlela ekhuselekileyo iisms ukuhlangabezana uphuhlisa esemgangathweni, kodwa akazange avume lula kwaye usoloko kukulinda yakho ekuqalekeni.